Nov 21 – တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ၊ ရန်ကုန် – Thet Nandar
Nov 21 – တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ၊ ရန်ကုန်
တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ မုဒ်ဦး အ၀င်ဝကို မန္တလေး နန်းမြင့်မျှော်စင်အပေါ်ထပ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်း
နန်းမြင့်မျှော်စင်ပေါ်ကို မမောမပမ်းတက်လာသော သမီးလေး Angel
mum တို့မိသားစု အမှတ်တရ
ဒီလှေကားကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်တွေနဲ့ အပေါ်ကို တက်လာတာလေ။
ဒီမျှော်စင်အထဲမှာတော့ ပန်းချီကားချပ်တွေ ရှိတယ် ပြောကြတာပဲ။ အဲဒီနေ့က သွားမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခေါက်မှပဲ သေချာ စုံနေအောင် သွားကြည့်တော့မယ်။
လှေကားက ပြေပါတယ်။ တက်ရတာ မမောပါဘူး။
ချင်းတိုင်းရင်းသားရိုးရာတံခါးဝမှာ သားနဲ့ သမီးလေး
ဗမာအိမ်ခြံဝမှာ ထားရှိတဲ့ ရေချမ်းစင်
ဗမာရိုးရာအိမ်ခြံဝင်းထဲက သီးပင်၊ စားပင်၊ ပန်းပင်များနဲ့ သမီးလေး
အိမ်ကျက်သရေနဲ့ လာဘ်ကိုဆောင်တဲ့ ဇီးကွက်မောင်နှံ
အမှတ်တရ မြန်မာရိုးရာအ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ခက တစ်စုံကို 500 ကျပ်။ (ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်)
ဆွဲကြိုး။ ခါးစည်း၊ ခေါင်းစည်း၊ လက်စည်း အဲဒါတွေလည်း ပါသေးတယ်။
မဏိစန္ဒာမင်းသမီးလေး Angel @ ရတနာ
ဖိုးဝ ရုပ်သေးရုပ်လေးနှင့် မဏိစန္ဒာ
မြန်မာ့မြေသားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းအိုးနှင့် မဏိစန္ဒာ
December 22, 2009 Thet Nandar
12 thoughts on “Nov 21 – တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ၊ ရန်ကုန်”
ပုံတွေ သေချာ ကြည့်သွားတယ် အမရေ.. သမီးလေးက မဏိစန္ဒာ ၀တ်စုံလေးနဲ့ လိုက်တယ်.. သူ့ကိုယ်လုံးက ပြည့်ပြည့်လေးဆိုတော့ ကြည့်ကောင်းတယ်.. မောင်နှမ ၂ ယောက် ရိုက်ထားတဲ့ အဲဒီပုံလေးကို သဘောကျတယ်.. သားသားကတော့ ရှမ်းအင်္ကျီလေးနဲ့..ချစ်စရာလေး.. သားသားက နေပူလို့ မျက်မှောင်လေး ကျုံ့ထားတာများ လူကြီးလေးလိုပဲ.. 🙂
မိန်းကလေးတွေက အဲလိုမျိုးပဲ။ ဆင်လို့ကောင်းတယ်။
အကျီလှလှလေးတွေ ဆင်လိုက်ရင် အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းကြတာကြီးပဲ။
ယောကျာ်းလေးဆိုရင် ဆင်စရာ ဒီဇိုင်း နည်းတယ်။
very pretty angel ….i love them.
ကလေးတိုင်းက အပြစ်ကင်းစင်ပီး ချစ်ဖို့ ကောင်းကြတာကြီးပါပဲ။
Jasmine သား နဲ့ သမီးလေးလည်း ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပါပဲ။
ပုံလေးတွေကြည့်သွားတယ်… Angelလေးက အမေတူ…သားက အဖေတူထင်တယ်…ဟုတ်လား… ဒို့လဲ ခလေးတွေကို ဒီဇင်ဘာကျရင် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာလိုက်ပို့ပြီး ကရင်ဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမလားလို့ စဉ်းစားထားတယ်…. Angelနဲ့ ကျမသမီးလေးနဲ့ တစ်လဘဲကွာတယ်နော်… ကျမသမီးလေးက ဒီဇင်ဘာ၂၁ ရက်နေ့မှာ ၈နှစ်ပြည့်မှာ… မိသားစုအားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ…
Angel ကို အမေနဲ့တူတယ် ပြောလို့ ကျေးဇူးပါ။
တိုင်းရင်းသားကျေးရွာက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကရင်ရိုးရာအိမ်လေးနဲ့ ကရင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ သမီးလေးနဲ့ သားလေးက ဓာတ်ပုံ တွဲရိုက်ရင် အရမ်းကို ချစ်ဖို့ ကောင်းနေမှာပါ။
Angel အမြဲတန်း ပြောတတ်တာက သူ့ မွေးနေ့ က January သားသား Heaven မွေးနေ့က နိုဝင်ဘာ။
ဘုရားသခင် မွေးနေ့ က
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ မို့လို့ သူ့ကို့သူ ဘုရားသခင်ရဲ့ နတ်သမီးလေးတဲ့။
မနော်ဖော သမီးက ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ဆိုတော့ ဘုရားသခင် နတ်သမီးလေး ပိုပီးနီးစပ်သွားတယ်။
ကျေးဇူးပါ။ မနော်ဖောတို့ မိသားစုလည်း ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပါစေ။
Wow….Angel and Heaven are veryyyyy brave…. really impressed them..
if i were in their place,,,i will faint (Bandoola blood),,, =)
Yangon Zoo post က
မြွေနဲ့ ဓာတ်ပုံ တွဲရိုက်ထားတာကိုပြောတာနဲ့ တူတယ်နော်။
ကလေးတွေက အန္တရာယ်ရှိမှန်း မသိသေးတော့ ကြောက်ရမှန်း မသိတာလည်း ပါသလို၊ အိမ်မှာလည်း
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ မွေးကတည်းက ရင်းနှီးနေတော့
တိရစ္ဆာန်ဆိုတာ သူတို့အတွက်
မြွေပါးစပ်ကို အဖြူရောင်တိတ်ကြည်နဲ့ ပတ်ထားတာလည်း ပါသလို၊
ဥပမာ – မြွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း မြွေကြီးက ရုတ်တရက် ရစ်ပတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ပါးစပ်က တိတ်က အသာထား။ သူ့အမြီးနဲ့ ရစ်ပတ်ပီး ဆွဲဆန့်လိုက်ရင်ပဲ။
ကျနော်တို့နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဌာနတစ်ခုပါ။ သမီးလေးရတနာက ရိုးရာဝတ်စုံလေးနဲ့ ပိုလှပါ သမီးရတနာ။
ကျွန်မ အနည်းငယ် သိရသလောက်က တိရစ္ဆာန်ရုံဥယျာဉ် နှင့် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ အပြင် တခြား အပန်းဖြေ ဥယျာဉ် တော်တော်များများက သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန လို့ သိထားဖူးလို့ပါ။